KIO ကခဵင်လတ်ြလပ်ရေးအဖြဲႚ ဌာနခဵပ်ြတည်ရြိရာ လိုင်ဇ္ဘာမြိႚမြာ ၂၀၀၉ ဖေဖော်ဝၝရီ ၅ရက်နေႚက ကဵင်းပသော ကခဵင်တော်လန်ြရေးနေႛ အခမ်းအနားတငြ် KIO တပ်ဖြဲႚဝင် ၁၅၀၀ခန်ႛက လက်နက်အူပည့်အစုံဖင့် ဥက္ကှူ ဦးဇောင်းဟရားကို ခဵီတက်အလေူးပြူခင်းသည် ထူးခားမအြူဖစ် ယူဆုကပၝသည်။ (Photo: RFA)
ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျိမ်းစ်လွန်းဒေါင်းနဲ့ မေးမြန်းချက်
ဗမာ-ရိုဟင်ဂျာအသင်း ဆွေးနွေးပွဲ တင်ပြချက်
wunpawng mung dan shang lawt hpung KIO/KIA kaw nna dai zawn gala hte matut mahkai ai lam gaw nau lai wa na re .Htawm hpang de anhte amyu niarawt jat kalu kaba lam hta grai hkra machyi wa na lam re ai hpe dum chye let sadi sahka let woi awn na hpe myit mada ai
Feb 15, 2015 04:30 PM
ကချင်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များ ၊ ပြည်ပ ကချင်အဖွဲ များ ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးသင့် ပါသည်၊ ရည်ရှည် ကိုကြည့် ပြီး လုပ်ဆောင်သင့် ပါသည် ။ ရိုလင်ဂျာခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေဘယ်သူ တွေလဲ ၊ ဘာရည်ရွယ်ချက်ဦးတည်ချက်လည်း ဆိုတာ သုံးသပ် ပြီး မှ စကား ပြော သင့် ပါသည် ။
Oct 20, 2014 04:43 PM
KIO and Myanmar Military are in need of dollars from OIC; this is your making that is too dangenous for Myanmar national security. We clearly know that what is going on. The Govt. and KIO are playing for their interest. You have known these Bengali Muslims are radical Islam or jihadists! They are using as tactic the human rights shield; but, they are definitely committed crime against humanity!
Sep 13, 2014 04:37 PM
“ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ကချင်ဟာ ညီအကိုဖြစ်တဲ့အတွက် အပြန်အလှန် အကူအညီပေး ဖို့ ပြောဆိုခဲ့သလို..” ။ အင်း..ဆွေမျိုးးစပ်ပြီး နယ်မြေမှာ လှုပ်ရှားခွင့်တောင်းလို့ရစတမ်းဆိုရင် နေပြည်တော် မှာ လှုပ်ရှားနိုင်အောင် “တူဝရီး”တော်တယ်လို့ ဆွေမျိုးး
Sep 11, 2014 01:16 PM
ကချင်က ကိုယ့်နိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားအရင်းပါ။ သူတို့လူမျိုး လွတ်လပ်ရေးကို တိုင်ပွဲဝင်နေတာပါ။ ရိုအင်ဂျာက တိုင်းရင်းသားလည်းမဟုတ်၊ ကိုယ့်နိုင်သားလည်းမဟုတ်ဘူး။ သူတို့က ဘာကိုလိုလို့ လက်နက်ကိုင် တိုင်ပွဲဝင်မှာလဲ။ ဒို့ဘိုးဘွားပိုင်တဲ့ ဗမာနိုင်ငံ၊ ဗမာပြည်ကို လိုချင်ရင်တော့ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး ဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့ပူးပေါင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ ၀င်တဲ့အတွက် နောက်နောင် နောင်တရစရာတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မျောက်လက်ကို မီးခြစ်အပ်လိုက်သလို ဖြစ်လာလိမ့်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လည်ပင်း ကိုယ်ကြိုးကွင်းစွပ်မယ့်အဖြစ်ကို ခုကတည်းက ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်ကို အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း အလေးပေးစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။